Online background collation tool for new arrivals - Somali
Lambarka Gaarka (khaaska) ah ee Ardayga
Magaca koowaad (Hore)*
Maxaad Tahay * Lab Dhedig Please select your family status.
Unuggaagi xaggee uu kaga jiraa Qooyska: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meeshee ama halkee ilmahaagu ku dhashay? * Please choose Afghanistan Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antarctica Antigua and Barbuda Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaidjan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnia-Herzegovina Botswana Bouvet Island Brazil British Indian Ocean Territory Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Canada Cape Verde Cayman Islands Central African Republic Chad Chile China Christmas Island Cocos (Keeling) Islands Colombia Comoros Congo Cook Islands Costa Rica Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic East Timor Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Falkland Islands Faroe Islands Fiji Finland Former USSR France France (European Territory) French Guyana French Southern Territories Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Gibraltar Greece Greenland Grenada Guadeloupe (French) Guam Guatemala Guinea Guinea Bissau Guyana Haiti Heard and McDonald Islands Honduras Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Iraq Ireland Israel Italy Ivory Coast Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Kenya Kiribati Kuwait Kyrgyzstan Laos Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macau Macedonia Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Marshall Islands Martinique (French) Mauritania Mauritius Mayotte Mexico Micronesia Moldavia Monaco Mongolia Montserrat Morocco Mozambique Myanmar, Union of (Burma) Namibia Nauru Nepal Netherlands Netherlands Antilles Neutral Zone New Caledonia (French) New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Niue Norfolk Island Northern Mariana Islands Norway Oman Pakistan Palau Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Pitcairn Island Poland Polynesia (French) Portugal Qatar Reunion (French) Romania Russian Federation Rwanda S. Georgia & S. Sandwich Islands Saint Helena Saint Kitts & Nevis Anguilla Saint Lucia Saint Pierre and Miquelon Saint Tome and Principe Saint Vincent & Grenadines Samoa San Marino Saudi Arabia Senegal Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Solomon Islands Somalia South Africa South Korea Spain Sri Lanka Suriname Svalbard and Jan Mayen Islands Swaziland Sweden Switzerland Tadjikistan Taiwan Tanzania Thailand Togo Tokelau Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Turks and Caicos Islands Tuvalu Uganda UK Ukraine United Arab Emirates Uruguay US USA Minor Outlying Islands Uzbekistan Vanuatu Vatican City Venezuela Vietnam Virgin Islands (British) Virgin Islands (USA) Wallis and Futuna Islands Western Sahara Yemen Yugoslavia Zaire Zambia Zimbabwe
Ilma haagu ma ku noolaaday wadan kali?
Qo'iskaagu Taariikh dee ay dalka UK soo galeen? *
Waa maxay diinta ilmahaagi? Please choose No specific religion African Traditional & Diasporic Baha'i Buddhist Catholic Chinese traditional religion Christian Hindu Muslim Jain Jewish Rastafarian Shintoist Sikh Zoroastrian
Arrimo kale haddii ay jiraan
Qooyskaaga ma waxay ka soo horjeedan dad Qaxooti ama magan geliyo doon? Haa Maya
Maxay ahayd da'da ilmahaagu markii uu waxbarashada bilaabay? Please choose Never been to school 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Hadii ay jirtay wakhti uu ilmahaagu ka maqna waxbarashada (mudo kala go'an) oo ay jawaabtu tahay (haa), intee in leeg ayuu ka maqnaa?
Ilmahaagu miyuu qabaa wax dhibaato ama garashadiisu dhimantahay oo ku keenaysa waxbarashadiisa dhibaato, oo aanu ogaanno?
Maxay yihiin Maaddadaha uu ku bartay dalkiisii?. Buuxi jawaabaha hoos kuqoran
Luqad ama afkee uu isticmaali kara?Buuxi jawaabaha hoose:
Heerkeed u maleysayso in uu ilmahaagu joogaa ku hadalka afka Ingriisiga
Heerkee uu gaarsiisan yahay xagga akhriska ee afka Ingriisiga?
Heerke uu ka gaarsiisanyahay xagga qoraalka afkaf ingriisiga?
Ilmahaagu ma rabaa ama ma jecelyahay inuu barta afkiisa hooyo, wakhtiyada fasaxyada lagu jiro sida wiikandiga oo uu aado melaha lahu barto? Haa Maya
Ilmahaagu miyuu qabaa arrimo xagga caafimaad kiisa laxirira oo loo baahanyay inaan ka war hayno?
Waxuu gashadaa muraayad ama okiyaalaha Indhaha
Dawo ayuu qaata ama isticmaala
Fadlan soo faah faahi haddii ay jiraan cunno gaar ah uu u baahanyahay ilmahaagu
Ma u baahnaan doontaa tarjumaan marka aad la xiriirayso Iskuulka? Haa Maya
Ilmahaagu Maxuu ku wanaagsan yahy?
Hiwaayadahiisu ama balwadiiisu maxa tahay?
inuu iskuul ka tago oo uu shaqeeyovmarka uu gaaro 17 jir
Waxbarasho dambe sida Kolejka
Waxbarasho Sare sida Jaamacadda
Maxay yihiin shaqooyinka u jacel yahay marka uu waxbarashadiisa dhammeeyo?
Translation and audio files by Ethnic Minority Achievement Service Cambridge Education @ Islington